आफु भन्दा २५ बर्ष जेठा शेरधनसंग बिवाह गर्ने लागेकी ज्याङ्मुको यस्तो रहेछ इतिहाँस, सगरमाथा चढ्ने सपना यसरि फेल भएको रहेछ ! – Online Nepal Site
काली भएका कारण अमेरिकाबाट भारत फर्कन बाध्य भईन प्रियंका !
यस्तो छ तपाईको बुधबारको भाग्य, पाथिभारा माताको दर्शन गरी फागुन १९ गतेको राशीफल हेर्नुहोस्
मुख्य पृष्ठ /News/आफु भन्दा २५ बर्ष जेठा शेरधनसंग बिवाह गर्ने लागेकी ज्याङ्मुको यस्तो रहेछ इतिहाँस, सगरमाथा चढ्ने सपना यसरि फेल भएको रहेछ !
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूभन्दा २५ वर्षभन्दा बढी उमेर अन्तर भएकी ज्याङ्मु एन शेर्पासँग विहे गर्न लागेका छन्। ५० वर्षिय राईले आगामी माघ ११ गते २३ वर्षिय शेर्पासँग विवाह गर्न लागेका हुन्। सन् २०१८ की ‘मिस मंगोल नेपाल’ समेत रहेकी शेर्पा तत्कालिन समयमा मिस मंगोल नेपालमा सहभागी हुन आउँदा १९ वर्ष हाराहारीकी थिइन्। ‘मिस मंगोल नेपाल, मिस ई-कलेज प्रतियोगितामा भाग लिन आउँदा ज्याङ्मु शेर्पा करिब १९ वर्षकी थिइन्’, आयोजक सिजन मिडियाका प्रमुख प्रदीपराज वन्तले भने, ‘अहिले त्यहीँ २२-२३ वर्षभन्दा बढी भएकी छैनन्।’
मुख्यमन्त्री राईको विवाहबारे उनको सचिवालयले पुष्टि गर्दै विवाहको मिति सार्वजनिक गरेको हो। उमेरमा निकै ठूलो अन्तर रहेको ज्याङ्मु र मुख्यमन्त्री राईको प्रेम विवाह हुने भएको हो । मुख्यमन्त्री राईको पुर्खौली घर भोजपुर हो भने जाङ्मु संखुवासभाकी हुन्। उनी हाल काठमाडौंमा हजुरआमासँग बस्दै आएकी छन्। उनका बाबु–आमा भने अमेरिकामा छन्।
प्रारम्भीक शिक्षा काठमाडौंको अल्पाइन् भ्याली स्कुलबाट पुरा गरेकी उनले हिमालयन इन्टर मोडलबाट उच्च शिक्षा लिएकी हुन्। राई र शेर्पाबीच काठमाडौंमा नेकपाका सीमित नेताहरू, निकट मित्र र पारिवारिक सदस्यबीच बिहे हुने भएको छ।
मोडल जाङ्मु इन शेर्पा २०१९ मा सगरमाथा आरोहण गर्ने तयारीमा थिइन् । यसका लागि उनी सगरमाथा आधार शिविर पनि पुगिन् ।
‘हाइ अल्टिच्युड टेस्ट’का लागि शिविर पुगेको केही महिनामै मिस मंगोलमा भिडिन् । मिस मंगोल–२०१८ को विजेता बनिन् उनी ।
मिस मंगोलको ताज जितेसँगै लक्ष्यको बाटो मोडियो । त्यसपछि सगरमाथा आरोहणको कार्यक्रम थाँती राखे र असहाय बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम योजना अघि सारिन् ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको छोराको जन्ती सात जना, यसरी भयो बिहे